Torolàlana vovoka proteinina mora vidy: Mampitaha, mividy ary mitahiry (2019) - Fahasalamana | Desambra 2021
Fiaraha-Monina, Fahasalamana Lalao Fanatanjahan-Tena Mavesatra Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina Fialam-Boly Orinasa, Vaovao Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Fahasalamana Wellness Pets Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fanabeazana Ara-Pahasalamana Orinasa Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina, Vaovao Vaovao, Wellness
Tena >> Fahasalamana >> Torolàlana vovoka proteinina mora vidy: Mampitaha, mividy ary mitahiry
Torolàlana vovoka proteinina mora vidy: Mampitaha, mividy ary mitahiry
Ny ankamaroan'ny olona dia mihinana proteinina amin'ny sakafony, ka izany no mahatonga ny olona maro hitodika amin'ny vovon-tsakafo proteinina. Mampalahelo fa ny vovo-proteinina dia mety ho lafo, izay no antony nahitako ny safidy vovoka proteinina mora vidy tsara indrindra hitazomana ao anatin'ny teti-bola antonony.
Ny fampitomboana ny proteinina dia tsy vitan'ny hoe manampy anao hijanona ho lava kokoa, fa hanampy amin'ny fanamboarana hozatra aorian'ny fampihetseham-batana mafy, ahafahanao miarina haingana alohan'ny fotoam-pivarotan-tena manaraka. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny proteinina sy hahalalanao izay ilain'ny vatanao dia manorata any amin'ny faran'ity lahatsoratra ity.
Vovon-proteinina miorina amin'ny zavamaniry Orgain Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Mpisolo sakafo tsara
Vidiny: $ 26,99 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Vovon-tsakafo proteinina tsara indrindra, lavanila Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Miorina amin'ny zavamananaina sy zavamaniry
Vidiny: $ 29,99 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Protéine voajanahary ambany kaloria, Cupcake lavanila Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Matsiro toy ny mofomamy
Mampiroborobo ny fahaverezan'ny tavy
Tsy misy menaka na asiana siramamy, karbaona ambany
Vidiny: $ 7.45 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
IZAO Zava-mahadomelina Protein-totozy Pea, 2 lbs Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Mamehy ny fahazotoan-komana
Ireo akora ilaina amin'ny kalitao
Fianakaviana manana sy miasa
Vidiny: $ 21.81 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Powder Proteinina miady amin'ny MusclePharm Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Betsaka ny tsiro tsy mitovy
Fangaro ny proteinina dimy navoaka elaela
Mifangaro anzima fandevonan-kanina
Vidiny: $ 43.89 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Proteinina madio 100% Whey Chocolate Rich Chocolate Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Be proteinina, ambany tavy sy siramamy
Tohano ny hozatra sy tanjaka mahia
Matsiro be afangaro amin'ny zavatra rehetra
Vidiny: 15,46 $ Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
P2N tampon'ny fampisehoana sakafo mahavelona P2N Whey Protein Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Vidiny: $ 18.36 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Proteinina Collegiate Milk hozatra: Cookies ‘N Crème Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Tena mora vidy tokoa
Kobà ampy hanoloana sakafo
Matsiro toy ny gilasy
Vidiny: $ 39,99 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Ronono hozatra 100 Calorie Protein Powder, Chocolate Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Potasioma be dia be
Vidiny: $ 23,99 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Vega Proteine ​​& Vanilla maitso Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Zavamaniry misy legioma miaraka amin'ny anana maitso
Tonga amin'ny tsiro taonina
Isopure Zero Carb tsy voavoatra vovoka proteinina 25g Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Fangaro roa ihany
Tsy misy tsirony
25g an'ny protien
Vidiny: 19,98 $ Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Vital Proteins Collagen Protein Powder Supplement Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
20g proteinina isaky ny sakafo
Tena tsy misy tsirony
Tonga amin'ny habe roa
Vidiny: 24,95 $ Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Powder proteinina miorina amin'ny zavamaniry KOS Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Proteinina mifototra amin'ny vegan sy zavamaniry
Tonga amin'ny tsiro mahafinaritra efatra
Fangaro voajanahary tokoa
Proteinina matanjaka amin'ny zavamaniry OLLY Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Tsy dia mamy loatra
Fomba fahandro Vegan
Vidiny: $ 20.32 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
Tsy dia mitanjaka Whey Vanilla Proteinina 1 LB Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon
Fangaro telo fotsiny
Tsiro matsiro maromaro
Vidiny: $ 21.99 Miantsena ao Amazon Miantsena izao Vakio ny fanadihadianay
1. Vovoka proteinina miorina amin'ny zavamaniry Orgain
Vidiny: $ 26,99 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Tsy clump rehefa mifangaro
Raha ny tena izy dia tsara, izay asa sarotra ho an'ny vovoka proteinina, avelao ihany ny proteinina miorina amin'ny zavamaniry
Firafitra tsy mamy
Mamy amin'ny stevia izy ity, ary mety ho mamy loatra amin'ny olona sasany. Na izany aza, tsy misy stevia aorinan'ny sakafo matavy.
Mety hiteraka fahasosorana amin'ny fandevonan-kanina ireo izay saro-pady
USDA Organic, tsy misy gluten, kosher, vegan, non-GMO, tsy misy soja, tsy misy ronono, tsy misy carrageenan, tsy misy akora namboarina. Raha mitady vovo-proteinina mora vidy ho an'ny olona rehetra ianao, dia izany no izy.
Ankafizo ny proteinina miorina amin'ny zavamaniry 21 grama voaangona avy amin'ny voa voajanahary, vary volontsôkôla ary voa chia. Fibre biolojika 5 grama ary karbaona netin'ny grama 3 (siramamy 0) no mahatonga ity vovo-proteinina kaloria 150 ity ho tonga lafatra ho an'ireo mpanao sakafo ambany karba (na tena mpihinana sakafo.) Mampiasà eny an-dalana ho solon'ny sakafo, amin'ny savony na amin'ny paositra -Fampiofanana. Tonga amin'ny tsiro matsiro toy ny Creamy Chocolate Fudge sy Vanilla Bean.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny Orgain Organic Plant mifototra amin'ny vovoka Protein eto.
VideoLahatsary mifandraika amin'ny vovoka proteinina miorina amin'ny zavamaniry orgain2018-10-16T10: 50: 34-04: 00
2. Powder Proteinina miorina amin'ny lozisialy ara-tsakafo, lavanila
Vidiny: $ 29,99 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Afangaro tsara amin'ny ronono na rano ary mora afangaro
Soloy sakafo maraina tsara raha maika ianao
Tsiro mahafinaritra, tsy dia mamy loatra - mety tsara.
Betsaka ny olona no milaza fa ity no vovo-tsiranoka proteinina tsara indrindra nampiasainy hatrizay
Mila afangaro matetika na misaraka anaty ranoka
Manana kojakoja famenoana izay mety tsy tian'ny olona sasany amin'ny proteinina toy ny sucralose (zava-mamy).
Tsy misy afa-tsy amin'ny tsiro vitsivitsy
Ity famenon-tsakafo maraina ity dia izay ilainao rehetra hanombohana ny andronao amin'ny proteinina kalitao 20 grama sy kafeinina 120mg avy amin'ny loharano voajanahary (mitovy amin'ny kaopy kafe iray). Atambatra amin'ny ronono na rano ary alao ity shake proteinina misy tsiro mahafinaritra ity eny am-pandehanana rehefa mila solika sy angovo ianao.
Mitadiava bebe kokoa momba ny vovo-tsolika proteinina kininina Bun amin'ny alàlan'ny fampahalalana momba ny fanjarian-tsakafo Optimum eto.
3. Designer Protein LITE, Protein voajanahary ambany kaloria - Cupcake Vanilla
Vidiny: $ 7.45 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Tsy misy tavy, tsy ampiana siramamy, karbaona tena ambany, tsy misy gluten ary kosher.
Ny Designer Protein dia nanampy voan-kafe maitso sy garcinia cambogia ho an'ny raikipohy, izany no antony tsy tokony handraisanao izany amin'ny alina. Ireo fangaro ireo dia mampiroborobo ny fahaverezan'ny tavy raha mbola tsy misoloky ny sakafonao sy ny programa fanatanjahan-tena ianao.
Feno rano izy io ka anaovy ronono na mpisolo ronono. Reko fa tena tsara miaraka aminy ny akondro.
Tsy maintsy ataonao mifangaro / mihozongozona foana izy io na hipetraka eo ambany. Na raiso ho tifitra fotsiny. (Afaka afangaro vodka proteinina amin'ny vodka ve ianao? Tohiny…)
Mitady vovo-proteinina ambany kaloria? Ho anao ity iray ity. 10 grama ny proteinina soja tsy misy GMO mitokana sy ny proteinina whey mifangaro amin'ny vitamina, mineraly, prebiotika ary fibre. Ity dia vokatra elo iray izay tsy misy afa-tsy kaloria 60 sy karbaona 1g (fibre 4g) isaky ny sakafo.
Afangaroy izy amin'ny maraina mba hamelombelona ny metabolisma, aorian'ny fampihetseham-batana iray hanampiana amin'ny fampiroboroboana ny hozatra mahia, na amin'ny tolak'andro hariva mba hifehezana ny filan'ny nofo. Voalazako ve fa mofomamy mofomamy lavanila izany?
(Vao avy nahalala zavatra vitsivitsy aho ary hita fa mihena be ny alàlan'ny alikaola amin'ny alàlan'ny alikaola. Aza misotro sy mihorohoro ny proteinina, ry namana.)
Mikaroha bebe kokoa momba ny Designer Protein LITE, Protein voajanahary ambany kaloria, Cupcake Vanilla, fampahalalana sy hevitra momba ny 9.03 ons eto.
4. ANTONY Sports Pea Protein Powder, 2 lbs
Vidiny: $ 21.81 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Fianakaviana manana & miasa, marika azo itokisana, miahy ny tontolo iainana, manome ho an'ny fikambanana mpanao asa soa. Manodidina ny olona tsara no tianao ho tohanana.
Tsy GMO, Kosher, gluten, vegan, karbaona ambany, tsy misy katsaka, tsy misy ronono, tsy atody, tsy misy voanjo, tsy misy soja, tsy misy siramamy. Manana ny saron'ny olona rehetra izy ireo.
Raha ny tena izy, marina, tsy misy tsiro - fa ny ankamaroan'ny olona dia aleony tsy misotro azy amin'ny rano. (Misy ny manao azy.) Afangaro amin'ny oatmeal, ronono, voasarimakirana, pancakes, entona namboarina, paosy gilasy, crust pizza… manaova famoronana eto!
Avy any Sina
IZAO fanatanjahan-tena dia marika mahazatra. Izy io dia fananan'ny fianakaviana sy niasa hatramin'ny 1968 ary azo itokisana tsara amin'ny sehatry ny atletisma noho ny fitsapana kalitao henjana ataon'izy ireo. Ity proteinina legioma Non-GMO mitokana proteinina 24 grama. Tsy misy lokony izy io ka mora mifangaro ary mampifanaraka ny tsiro ny zava-pisotro tianao (mmm, tsara ny malama eto).
Na dia vovo-proteinina mora vidy aza izy io dia misy lanja betsaka amin'ity paika ity: 4,200 mg asidra amine rojo branched ( BCAA ) ary mihoatra ny 2.000 mg ny L-Arginine dia ao koa. L-Arginine mampitombo ny hozatra ary mampiditra oksida azota amin'ny vatanao, mampiroborobo ny fiaretana sy ny fiaretana.
Mitadiava bebe kokoa ANTONY Sports Pea Protein Powder, fampahalalana 2 lbs sy hevitra eto.
5. Vovoka proteinina miady amin'ny hozatra
Vidiny: $ 43.89 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Afangaroy amin'ny proteinina dimy haingana, salantsalany ary malefaka mandetika izay mandevona amin'ny taha isan-karazany
Ny fifangaroan'ny anzima fandevonan-kanina dia mampitombo ny protease sy ny lactase hanampiana handray ny proteinina
Betsaka ny tsiro isan-karazany, ao anatin'izany ny mahazatra sy ny safidy hafa toy ny dibera voanjo sôkôla, voaroy telo ary cookies ‘n cream
Karbaona ambany, tsy misy gluten
Matsiro toy ny ronono vita amin'ny ronono izay tena tsara ho anao… fa raha tsy mampiasa tavoahangy na mixer ianao.
Mamy izany. Miomàna.
Ity dia an'ny mpiady any ivelany izay te-hampitombo ny fitomboan'ny hozatra sy ny fanarenana.
Ity dia a fanahy vovoka proteinina mora vidy izay midika fandraharahana miaraka amin'ny 25 grama mifantoka whey, mitoka-monina whey, hydrolyzate whey, casein micellar, albumin atody, BCAA, glutamine, ary anzima fandevonan-kanina. Miara-miasa ireo zavatra rehetra ireo mba hamoahana vovoka proteinina mampitony miadana izay manavao ny vatanao tontolo andro. Raha te hahalala marina ny zavatra ataon'ireo sakafo rehetra ireo dia zahao ny rohy eto ambany.
Mitadiava vovon-tsavony proteinina MusclePharm Combat: fifangaroan'ny Whey, Isolate, Casein ary Egg Protein miaraka amin'ny BCAA's sy Glutamine, fampahalalana 4 lbs eto.
6. Proteinina madio 100% Vovoka Whey Chocolate na Vanilla Cream, 1,75 pounds
Vidiny: 15,46 $ Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Manohana ny hozatra mahia sy tanjaka
Matsiro be afangaro amin'ny zavatra rehetra ary mifangaro tsara
Ny vovo-proteinina tiako indrindra (hendry) raha maninona na inona na inona
Tonga koa amin'ny fihororohana proteinina mandeha
Ny sasany mahita fa mamy loatra izany, fa ny marimaritra iraisana dia ity no iray amin'ireo vovoka proteinina tsara indrindra amin'ny vidiny
Tsy dia tsara ny tsiro lavanila
Pure Proteine ​​no tiako indrindra manandrana vovo-proteinina mora vidy. Matetika aho mividy ilay mihozongozona mialoha miaraka amina proteinina 35g satria kamo aho. Iray hafa izay mitovy amin'ny tsirony amin'ny ronono miloko izay misy tsiro roa: sôkôla manankarena na crème vanille. Fanoloana sakafo mahavariana na fihoviana eo anelanelan'ny sakafo izany. Ny crème lavanila dia mahatsapa mahavariana amin'ny malama ary ny sôkôla dia tena manatsara ny kafe maraina.
Mitadiava Proteinina Pure 100% Whey Powder Rich Chocolate na Vanilla Cream, fanazavana 1,75 pounds sy hevitra eto.
7. Sakafo P2N tampon'isa mahomby P2N Whey Protein
Vidiny: $ 18.36 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Vovon-tsakafo proteinina mifaninana izay manandrana tsara - tsy dia mamy sy faran'izay avo lenta amin'ny vidiny
Natao tany Etazonia & nosedraina tsy miankina amin'ny fahadiovana sy kalitao
Misy ny milaza fa mamy loatra, misy milaza fa be rano loatra ary tokony hampitomboina ny scoop. ___ (ツ) _ /
Ao anaty kaontenera 2lb ihany no tonga
S scoops roa isaky ny sakafo no mahatonga azy io hanjavona haingana
Ny akora Premium dia mitambatra mba hanetsiketsehana ity vovoka proteinina mora vidy ity miaraka amina 30g proteinina tsy misy fangarony, 6.7g BCAA, ary fifangaroana fanarenana 4.5g an'ny Creatine, Taurine & L-Glutamine hananganana tanjaka sy hanohanana ny hozatrao malemy rehefa tafarina.
Betsaka ny olona manao fianianana amin'ity.
Mitadiava bebe kokoa P2N Peak Performance Nutrition P2N Whey Protein, fampahalalana 2 kilao eto.
8. Vovon-tsiranoka proteinina miompana amin'ny ronono hozatra, Cookies ‘N Crème
Vidiny: $ 39,99 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Ny tsiro 'n cream cream flavour dia mitovy amin'ny cookies' n ice cream
Fanoloana sakafo tsara ho an'ny olona eny an-dalana - ity kaloria ity dia manana kaloria bebe kokoa
Nahazo Protein Digestibility Amino Acid Score (PDCAAS) an'ny 1.0. (Ny isa avo indrindra azo zahana proteinina sakafo)
Averina indray, ity dia manana kaloria bebe kokoa, koa raha tsy mitady hamory betsaka ianao, dia mety ho tsara kokoa ho anao ny proteinina hafa. Na, IIFYM. Ianao no manao anao.
Sopa efatra = proteinina 40 grama. Scoops be dia be izany - saingy tsy tokony ho io no proteinina tokana anananao. Afaka mikapoka zavatra amin'ny scoops iray na roa fotsiny ianao.
Mora = loharanom-proteinina mora vidy
Scoopy roa na efatra amin'ity vovo-dronono ity dia manome faharetana sy fiaretana amin'ny fampihetseham-ponao SY ny andronao. Muscle Milk Collegiate dia mpamaky sakafo mahasoa ho an'ireo izay mandeha foana - indrindra ny mpianatra - satria manana kaloria salama izay mameno anao tokoa. Afangaroy ny legioma mahasalama toy ny epinara na kale ao anaty malama rehefa miampy kolezinina Milk Milk ary hosaronany ny tsiron'ny legioma.
Hita ihany koa amin'ny frezy ‘n crème, sôkôla ary vanilla crème.
Mitadiava vovon-tsakafo Protein Milk Collegiate bebe kokoa, Cookies ‘N Crème, 20g Protein, 5.29 lbs vaovao sy hevitra eto.
9. Ronono hozatra 100 Calorie Protein Powder, Chocolate
Vidiny: $ 23,99 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Azo ampiasaina alohan'ny fanazaran-tena, aorian'ny fampiofanana na ho sakafom-be proteinina
Manangana hozatra mahia, manome fahafaham-po ny hanoanana, mampiroborobo ny angovo maharitra, NSF voamarina ho an'ny Sport
Potassium potassium isan-scoop (190g) sahaza azy, izay otrikaina lehibe iray ho an'ny fahasalamana tsara izay tsy afaka manampy amin'ny pilina.
Averina indray, satria fitarainana malaza amin'ny vovo-proteinina rehetra ity: misy ny mihevitra fa mamy loatra.
Olona iray no nitatitra ny vavony nalahelo. Tsy dia be loatra ny hevitra ratsy momba an'ity, ka mitahiza.
Tsy ampy ny kaloria azo soloina sakafo
Ity vovo-proteinina ronono 100 kaloria ity dia saika ny mifanohitra amin'ilay voalaza etsy ambony satria vitsy kaloria noho ny ankamaroany. Tsy lafo ihany koa, fa ity iray ity dia tsy manana afa-tsy kaloria 100, siramamy 0 grama, fibre 5g, ary vitamina sy mineraly 20 mahatalanjona hanomezana fahafahampo sy hahavelona anao mandritra ny andro. Izy io koa dia manome anao asidra amine 9 ilaina rehetra izay tsy vitan'ny vatana. Ity vatolampy vovoka proteinina mora vidy calorie 100 ity dia nanitatra ny fandefasana proteinina ao amin'ny vatana.
Mitadiava vovon-tsavony 100 kilao, proteinina 15g proteinina, 1,65 Pounds vaovao eto, ary jereo eto.
10. Vega Protein & Vanilla maintso
Zavamaniry misy legioma misy legioma fanampiny ho an'ny otrikaina bebe kokoa
Tonga amin'ny tsiro taonina miaraka amina fanolorana tokana
Afangaro mora foana hozongozonina sy malama
Vao haingana ny fanavaozana sy ny tsiro vaovao dia miovaova kely amin'ny raikila taloha raha zavatra efa nahazatra anao izany
Mampiasa stevia hanatsorana, izay mety hamono ny sasany
Mety ho mamy loatra amin'ny sasany
Vega Proteine ​​& Greens proteinina vanilla koa dia azo vidiana amina tsiro hafa raha tsy lavanila taloha no fomba fanao. Ity proteinina ity dia manana proteinina 20g isaky ny sakafo ary koa manana anana maitso misy vovoka alfalfa organika, vovoka epinara, vovo-broccoli, ary vovoka kale organik. Tsy vitan'ny hoe mahazo proteinina betsaka amin'ity vovoka ity ianao, fa misy vitamina sy otrikaina hafa koa.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny Vega Protein & Greens Vanilla eto.
11. Isopure Zero Carb vovoka proteinina 25g tsy voavoatra
Vidiny: 19,98 $ Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Fangaro roa ihany ho an'ny raikipohy madio sy madio ary tsy nasiana siramamy
Ny raikipohy tsy misy tsiro dia tsara amin'ny fandrahoan-tsakafo sy ny fanaova mofo, mahatonga ny sasany amin'ireo fomba fahandro tianao indrindra ho mavesatra amin'ny proteinina
25g ny proteinina dia somary avo
Tsy safidy tsara afangaro amin'ny rano na ronono ho an'ny fikolokoloana proteinina satria tsy misy tsiro
Fifanarahana somary maivana rehefa mifangaro
Aleo manao mofo fa tsy misotro irery
Raha mitady vovo-proteinina tsara tarehy ianao, Isopure Zero Carb tsy voavoatra vovoka proteinina 25g safidy mahafinaritra. Votoatiny roa ihany no anaovana azy, noho izany fantatrao fa tsy mahazo fanampiny tsy ilaina ianao. Tsara ihany koa raha tianao ny mampiasa vovo-proteinina amin'ny entanao voaendy tianao mba hahasalama azy ireo. Manana karbôro zero grama ary kaloria 100 fotsiny isaky ny sakafo.
Vidiny: 24,95 $ Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
20g proteinina isaky ny sakafo ary koa collagen izay afaka manampy amin'ny fanatsarana ny volo, ny hoho, ny tonon-taolana, sns
Tena tsy misy tsirony. Ampy izay mba azo afangaro anaty rano nefa tsy tsikaritra.
Tonga amin'ny habe roa raha te hanandrana ianao alohan'ny hanoloranao ny habe lehibe kokoa
Afangaroy tsara kokoa ao anaty efi-trano na ranon-javatra mafana noho ny rano mangatsiaka be
Raha tianao ny proteinina misy tsiro, tsy ho anao izany
Ny olona sasany dia afaka mahita famindram-po kely, na dia tsy mbola nahita mihintsy aho
Ny vovo-proteinina tiako indrindra dia Vital Proteins Collagen Protein Powder Supplement ary azo antoka fa mendrika izany amin'izay azonao. Raha miantsena amin'ny teti-bola ianao dia azonao atao ny mandray ny habe kely kokoa ary manandrama alohan'ny hanolorany tena amin'ny siny lehibe. Raha mankahala ny tsiro chalky mety ananan'ny vovoka proteinina ianao dia ho tianao fa tsy misy tsirony io vovoka proteinina io, indraindray aza misotro azy anaty rano aho ary tsy manandrana zavatra iray akory. Manana proteinina 20g isaky ny sakafo izy ary iray amin'ireo vovoka proteinina tsara indrindra eny an-tsena.
Mitadiava fampahalalana fanampiny momba ny Vital Proteins Collagen Protein Supplement sy hevitra eto.
13. Powder proteinina miorina amin'ny zavamaniry KOS
Tonga amin'ny tsiro mahafinaritra efatra - dibera voanjo, lavanila, puce mint ary sôkôla
Mety manana tavy be loatra ho an'ny sasany
Ny proteinina amin'ny mofomamy dia tsy mifangaro ary koa proteinina hafa
Mety ho sarotra ny mahita ny fanandramana tsara sy vovoka proteinina miorina amin'ny zavamaniry Powder proteinina miorina amin'ny zavamaniry KOS dia iray amin'ireo tsara indrindra hitanay. Ny vovo-proteinina dia misy tsiro efatra tena matsiro ary vegan tanteraka. Ny loharano azo avy amin'ny proteinina dia avy amin'ny zavamaniry dimy - 100 isan-jaton'ny voanjo tsy GMO, flaxseed, quinoa, voatavo, ary chia. Ity vovoka proteinina ity dia avo kokoa amin'ny tavy, izay zavatra tsy tokony ho adino raha manandrana sakafo matavy ambany ianao.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny zava-maniry KOS Organic Plant based Protein Powder eto.
14. Proteinina matanjaka amin'ny zavamaniry OLLY
Vidiny: $ 20.32 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Tsy dia mamy loatra, izay mety ho sarotra ny mahita azy amin'ny vovoka proteinina
Fomba fahandro Vegan miaraka amin'ny lisitr'ireo singa madio
Afangaroy tsara amin'ny rano ary atao malama
18g ny proteinina dia ambany noho ny vovoka hafa
Tsy manana otrikaina fanampiny fanampiny
Haben'ny tavoahangy kely
Sarotra ny mandresy ity vovo-proteinina miorina amin'ny zavamaniry ity. Tsy vitan'ny hoe mahavariana izy io, fa manana proteinina 18g isaky ny sakafo, izay vola be. Afangaroy tsara amin'ny rano izy io, lasa malama, ary tsy dia mamy loatra - zavatra izay mety ho sarotra ny mahita azy amin'ny vovoka proteinina. Mahafinaritra sy mameno izany - fitsaboana sahaza ho an'ny aorian'ny fampihetseham-batana.
Mitadiava fampahalalana bebe kokoa momba ny proteinina OLLY Plant eto.
15. Protein Vanilla tsy mitanjaka miboridana 1 LB
Vidiny: $ 21.99 Fanamarihana momba ny mpanjifa Amazon Miantsena ao Amazon Tombontsoa:
Fangaro telo ihany - iray amin'ireo fomba fahandro fohy indrindra
25g proteinina - avo kokoa noho ny ankamaroany
Tsiro matsiro maromaro izay matsiro sy mifangaro tsara
Sarotra afangaro raha tsy afangaro
Sarotra ny manafoana ny siny noho ny famolavolana - mety ho very maina ny ony vitsivitsy farany
Tsy voamarina voajanahary
Ankoatry ny marika marokoroko mahafinaritra sasany, dia mbola mila izany ny Less Naked Whey Vanilla Protein raha ny vovo-proteinina mora vidy no resahina. Tsy misy afa-tsy singa telo ao aminy, iray amin'ireo fomba fahandro madio indrindra hitantsika. Izy io koa dia manana proteinina betsaka amin'ny 25g. Tsy misy additives synthetic, misy tsiro maromaro, ary omena isa be ho an'ny tsiro sy fahaizana mifangaro tsara.
Fantatsika fa ilaintsika izany, fa inona marina dia proteinina?
Ny proteinina dia ampahany amin'ny sela tsirairay ao amin'ny vatantsika. Ny volontsika sy ny hoho no anaovana azy indrindra, ary ny vatantsika no mampiasa azy io hanamboarana sy hanamboarana ny hozatra. Mampiasa proteinina ihany koa izahay hamokarana hormonina, anzima ary akora simika hafa. Ilaina ny proteinina amin'ny taolam-paty, taolam-paty, hoditra, rà ary hozatra.
Ny proteinina dia mameno ny trio macronutrient miaraka amin'ny tavy sy gliosida. Midika fotsiny izany fa mila be dia be ny vatana. Tsy toy ny tavy sy karbona, ny vatantsika tsy mitahiry proteinina. Tsy afaka misintona ny sasany fotsiny izany raha mila izany amin'ireo fiasa isan'andro. (Afaka manao izany amin'ny tavy sy karbôna izy io.)
Ka, ohatrinona no ilainao?
Miankina amin'ny lanjanao izany. Ampitomboina 0,36 grama isaky ny kilao ny lanjanao. Raha adika kely miorina amin'ny salanisa dia mitovy amin'ny 56 grama isan'andro ho an'ny lehilahy mipetrapetraka ary 46 ho an'ny vehivavy. Raha manao fanatanjahan-tena ianao, dia mitaky zavatra bebe kokoa ny vatanao. Tolo-kevitra nodinihina dia 1 grama isaky ny pounds ny lanjan'ny vatana raha toa ka mazoto mahazo hozatra ianao.
Hevitra Bonus: raha manandrana mampihena ny lanjanao ianao dia afaka mihinana proteinina manatsara ny tahan'ny metabolika ary mampihena ny filan'ny nofo.
Farany, toro-hevitra pro: Mividiana mora shaker proteinina raha mbola tsy manana ianao. Afaka misaotra ahy ianao avy eo. Avy eo, raha tianao ny tsiron'ny proteininao dia afangaro amin'ny ronono na ronono soloina fa tsy rano. TSARA tsara kokoa noho ny afangaro amin'ny rano. Toy ny hoe mieritreritra 'milkshake'. Andramo ronono amandy, ronono voanio, na ronono keso tsy tiako. Azonao atao ihany koa ny mamorona amin'ny fomba fahandro; pancakes proteinina no bomb.com ary ny vovoka proteinina sy ny malama dia lalao natao tany an-danitra.
Famenon-tsakafo mihena 10 tsara indrindra: Mampitaha, mividy ary mitsitsy
Fikorontanana proteinina 5 tsara indrindra ho an'ny vehivavy
ny fomba hahazoana fanafody fanafody tsy misy fiantohana
azoko atao ve ny voan'ny gripa voatifitra tany Walmart
azonao atao ve ny mandray tums miaraka amin'ny pepto bismol
afaka mihinana zantac ve aho rehefa avy misotro toaka
mety ve ny mampiasa «sanitizer» efa lany daty